Xildhibaan ka tirsan maamulka Hirshabelle oo la Afduubtay | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Xildhibaan ka tirsan maamulka Hirshabelle oo la Afduubtay
Xildhibaan ka tirsan maamulka Hirshabelle oo la Afduubtay
Muqdisho (Halqaran.com) – Kooxo dabley ah oo loo maleynaayo inay ka tirsan yihiin Ururka Al-Shabaab ayaa gaari Hoomey kala dagay Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Hirshabelle, kaasi oo ku safraayay inta u dhaxeysa magaalooyinka Jowhar iyo Muqdisho.
Xildhibaankan oo magaciisa lagu sheegay, Maxamed Maxamuud Siyaad ayaa laga qafaashay xilli gaariga uu maraayay meel ku dhaw deegaanka Gololey.
Masuuliyiin ka tirsan Maamulka Hirshabelle ayaa xaqiijiyey afduubka loo gaystay Xildhibaankan ka tirsan Baarlamaanka Maamulka Hirshabelle.
Wararka ayaa sheegaya, in Shabaabka afduubtay Xildhibaanka ay kaligiis gaariga kala dageen, waxaana ay fasaxeen dhammaan rakaabkii kale ee saarnaa gaariga shacabka, kaasi oo ku sii jeeday Magaalada Jowhar.
Ilaa iyo hadda lama oga halka ay Al-Shabaab xildhibaankaasi ay u afduubteen, balse wararka qaar ayaa sheegaya in Xildhibaanka ay geeyeen deegaanka Yaaqle oo ka tirsan Shabellaha dhexe.
Waddada isku xirta magaalooyinka Muqdisho iyo Jowhar ayaa ah mid aad u xun ammaankeeda, waxaana dhowr jeer halkaasi lagu dilay mas’uuliyiin.
Xildhibaan ka tirsan Hirshabelle oo la afduubtay